विश्व शान्ति स्तूपमा नयाँ कार्यसमिति | eAdarsha.com
विश्व शान्ति स्तूपमा नयाँ कार्यसमिति
पोखरा । विश्व शान्ति स्तूप, अनदू, पोखराको ११ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पाँचांैै अधिवेशनले उत्तममान बुद्धाचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
यस्तै, उपाध्यक्ष अशोक गुरूङ, सचिव प्रकाशमान उदास, कोषाध्यक्ष अशोकमान बुध्दाचार्य, सह–सचिव चमबहादुर गुरूङ र सहकोषाध्यक्ष अनिल रत्न बुध्दाचार्य चयन भएका छन् । सदस्यमा खेमराज पौडेल, कृष्णमान गुभाजू, गोविन्द ताम्राकार, मनबहादुर गुरूङ, दुर्गा बहादुर गुरूङ, राजकुमारी गुरूङ र जमुना गुरूङ छन् ।
प्रकाशमान गुभाजू निर्वाचन संयोजक रहेको निर्वाचन समितिमा सदस्यमा क्या. भुवनसिं गुरूङ र सु. यमबहादुर गुरूङ थिए ।
कोभिड–१९ महामारीबीच सामाजिक दूरी कायम गरी आयोजित कार्यक्रमको विश्वशान्ति स्तुप समिति निवर्तमान अध्यक्ष एवं निर्वाचन संयोजक प्रकाशमान गुभाजूले उद्घाटन गरेका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष शंकर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष उत्तममान बुध्दाचार्यले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । यस्तै, सचिव अशोक गुरूङले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष अशोकमान बुध्दाचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो ।
कार्यक्रममा धर्मशीला बुद्ध विहार दायक सभाका अध्यक्ष गोविन्द ताम्राकारले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष बुद्धाचार्यले स्तूप विकासको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद ब्यक्त गरे ।
२०३० भदौ २७ पूर्णिमाको दिन निप्पोनजान म्योहोजी जापानका संस्थापक फूजी गुरूजी, अनगारिका गुरूमा धर्मशीला र पूर्व मन्त्री मीनबहादुर गुरूङले विश्वशान्ति स्तूपको शिलान्यास गरेका थिए ।